Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 503889 times)
Unit and4Guests are viewing this topic.
« Reply #680 on: September 16, 2011, 02:10:21 PM »
သဲကန္တာရထဲတွင် ဘောလုံးခရေဇီ လေးယောက် ရက်ရှည်ခရီး ဖြတ်သွားနေရသည်။ တစ်နေ့သ၌ မမျှော်လင့်ပဲ ယင်းလေးယောက်ထဲမှ တစ်ဦးမှာ ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားခဲ့ရာ ရိက္ခာပြတ်တော့မည့် သူတို့သုံးယောက်က သေဆုံးသွားသော ဘောလုံးခရေဇီတစ်ယောက်ကို ဇာတ်တူသားစားရန် ကြံစည်ကြလေရာ..
ပထမ တစ်ယောက်က "ငါက လီဗာပူးလ် (Liverpool) ဖန်ဖြစ်တော့ ဒီကောင့်ရဲ့ (Liver) အသဲကို ထုတ်စားမယ်ကွာ...
ဒုတိယ တစ်ယောက်က ၀င်ပြောသည် "ငါကတော့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်း (Manchester United) ရဲ့ ဖန်ဖြစ်နေလေတော့ သူ့ရဲ့ (Chest) ရင်အုံသားကိုပဲ စားမယ်ကွာ..
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်က ပြောလိုက်သည်မှာ "ငါကတော့ အာဆင်နယ် (Arsenal) ဖန်ဖြစ်ပေမယ့် ဗိုက်သိပ်မစာသေးပါဘူးကွာ" ဟု ဖြစ်လေတော့သတည်း........
credit to: myway - mutdfan.com
« Reply #681 on: September 16, 2011, 02:13:39 PM »
ကောင်လေး - ” ခင် .. ခင့်ပါးလေးကို နမ်းပါရစေနော် ”
ကောင်မလေး - ” ~~~ ” (ခေါင်းလေးငုံ.လျှက်)
ကောင်လေး - ” ခင်... ခင့်ပါးလေးကို နမ်းခွင့်ပြုပါနော် ”
ကောင်လေး - ” !!! ” ” မကြားဘူးလား နားလေးနေလားကွ”
ကောင်မလေး - ” ရှင်ကရော လေဖြတ်နေတာလား ”
From Azure gunner facebook..
credit to -phonemyintmaung - mutdfan.com
« Reply #682 on: September 16, 2011, 02:15:26 PM »
သူ့နံဘေးကမိန်းမက ကျွန်မလည်း အဲဒါပဲမှာလိုက်တာလို့ ပြောတော့ သူက "ကျွန်တော် ကတော့ ပျော်စရာကြုံလို့ ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့သောက်မှာ"လို့ ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသမီးကလည်း"တိုက်ဆိုင်လိုက်တာရှင်။ကျွန်မလည်း ပျော်စရာရှိနေလို့ ဝိုင်နီမှာ သောက်တာ "လို့ဆိုတော့ အမျိုးသားက ဘာများလဲလို့ မေးတော့"ကျွန်မတို့လင်မယားက အိမ်ထောင်ကျတာကြာပြီ။ ဒါပေမယ့် ကလေးမရဘူး။ ဒီနေ့ ဆရာဝန်က ကျွန်မမှာ ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ပျော်နေတာ"လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာအမျိုးသားက "တိုက်ဆိုင်လိုက်တာဗျာ။ကျွန်တော်က ကြက်မွေးမြူရေး လုပ်တာ ပါ။ ကျွန်တော့ကြက်မတွေ ဥမဥတာကြာပြီ။ ဒီနေ့ ကြက်မတွေ ဥပြန်ဥလို့ ပျော်နေတာ" လို့ဆိုတော့ အမျိုးသမီးက"ရှင်က ဘယ်လိုနည်းလမ်း သုံးလိုက်လို့တုံး"လို့ မေးပါတယ်။
ဒီတော့သူက "ကျွန်တော်လား၊ ကြက်ဖတွေလဲလိုက်တယ်လေ။ ခင်ဗျားရော"လို့ မေးလိုက် တော့ အမျိုးသမီးက "အို၊ တိုက်ဆိုင်လွန်း လိုက်တာရှင်"တဲ့။
credit to: aye chan maung - mutdfan.com
« Reply #683 on: September 16, 2011, 06:10:12 PM »
There are5friends inaroom,
namely Someone, Nobody, Mad, Brain and Fool.
One day, Someone killed Nobody. In that time Brain was in the bath-room.
Mad called the Police Station.
Mad :: "Is this Police Station?"
Police :: "Yes, what's matter?"
Mad :: "Here, Somebody killed Nobody."
Police :: "Hay, what are you talking?
Don't you have brain?"
Mad :: "No, I have not. Brain is in the bath-room."
Police :: "Oh, it is impossible, are you mad?"
Mad :: "yes, I'm Mad."
Police :: "Ha Ha, you are fool..."
Mad :: "No, I'm not Fool. Fool is reading this story now !!! "*
forward mail က ရတာလေး ပြန် share လိုက်တာပါ။
« Reply #684 on: September 16, 2011, 07:09:33 PM »
နေ့စဉ် မနက်စောစောတွင် ဆန်ပြုတ်သောက်လေ့ရှိသည့် မိသားစုတစ်စုရှိသည်။
ခုရက်ပိုင်းတွင် အငယ်ဆုံးကောင် က ဆန်ပြုတ်ကို သိပ်မသောက်ချင် မုန့်ဖိုးသာ
``ဒီမယ်သား မနက် မနက် မိသားစု ၀ိုင်းဖွဲ့ ပြီးသောက်ရတာ ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလဲ၊
ဆန်ပြုတ်ပူပူနွေးနွေးလည်း သောက်ရတယ်၊ မိသားစု စကား လည်းပြောရတယ်၊ သားရယ်
``ဟုတ်သားပဲ မောင်လေးရာ သောက်ပါ အားရှိပါတယ်´´ အစ်မလတ်က၀င်ပြောသည်.
``မသောက်ပါဘူးဗျာ အမေတို့ ဆန်ပြုတ်က ဆားခတ်ပြီးသောက်နေရတာ၊
ကြက်သားဘဲသား ထည့်ပါ လား၊ ငါ့ရံ့ခြောက်ဖုတ်ထည့်ပါလား၊ တော်ပြီဗျာ၊
ထိုအချိန်တွင်အဖေလုပ်သူက ``သားရေ ဖေဖေ့အနားကိုလာခဲ့ ဖေဖေတိုးတိုးလေးပြောပြမယ်´´
သားက အဖေလုပ်သူ၏အနားကိုကပ်၍သွားရာ အဖေက
တိုးတိုး တိုးတိုးပြောနေသည်။ သားဖြစ်သူက လည်း ခေါင်းကိုညိတ်နေသည်။
``ကဲ၊ သားဆန်ပြုတ်ပဲသောက်တော့မယ်၊ အမေထည့်´´
သားတော်မောင် ပြောင်းလဲသွားသည်။ သူ့အတွက်ခွဲတမ်းကုန်သွားသောအခါ
``မောင်လေးရော့၊ မမကြီး ဆီက ဆန်ပြုတ်ယူဦး´´
အစ်မကြီး ထိုးပေးသော ဆန်ပြုတ်ကိုဆက်သောက်လိုက်သည်။
ပြောင်းလဲသွာသော သားတော်မောင်ကို ကြည့်၍ အမေလုပ်သူမှာ အံ့သြ၀မ်းသာနေသည်။
ဆန်ပြုတ်ဝိုင်းပြီးသွား ၍လင်မယားနှစ်ယောက်ထဲ ကျန်သောအ ခါ ယောကျာ်းဖြစ်သူကို
``ကလေးကို တိုးတိုး တိုးတိုးနဲ့ ဘာတွေပြောလိုက်တာလဲ´´
``ကိုယ်က စာရေးဆရာပဲ၊ အကြံပိုင်ပါတယ်။ စာတစ်ပုဒ် ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးရသလောက်
မခဲယဉ်းပါဘူးကွာ သားရေ မင်းရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ
ဆန်ပြုတ်သောက်မှ မသောက်ရင် မကြီးထွား မဖွံ့ဖြိုးနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်´´
ထိုအခါ စာရေးဆရာ မဟေသီးက ယောကျာ်း၏ ခေါင်းကိုဇွန်းဖြင့်
ခပ်ဆက်ဆက်ခေါက်လိုက်သည်။ ပါးစပ် မှလည်း
``ဒါကို ရှင်သိရဲ့သားနဲ့၊ ငယ်ငယ်တုန်းက ဘာလို့ ဆန်ပြုတ်မသောက်ရတာလဲ`` တဲ့။
ကြိုက်တယ်ဆို vote ပေးကြနော်။ကျနော် စာမေးပွဲအောင်ပြီး အတန်းတက်ချင်လို့ ။ဟီဟိ.......။
« Reply #685 on: September 16, 2011, 07:41:59 PM »
တခါက အလွန်ကြီးမားတဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာ ကျားပေါက်တစ်ကောင်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်
ကျင်းပသတဲ့ .. ..
ကျားဆိုတာ တောဘုရင်(တောမျက်နှာဖုံး)ဆိုတော့ တောနေလှေအောင်း
မြင်းဇောင်းမကျန် ဆိုသလို တောသတ္တ၀ါတွေ မင်္ဂလာဆောင်ကို လာကြရ၊
မရှိ/ရှိတာလေး လက်ဖွဲ့ကြရတာပေါ့ .. အဲ … မင်္ဂလာဆောင်ရဲ့ Tempo
စုံစုံလင်လင် ရောက်နေတာပေါ့ .. ..
အဲလောက် ပရိသတ်များများမမြင်ဘူးတဲ့ ပရိသတ်ထဲက မျောက်တစ်ကောင်က သူ့ဘေးမှာ
ထိုင်နေတဲ့ နွားထီးတစ်ကောင်ကို မေးသတဲ့ .. ..
“ဒီလောက်စည်ကားတဲ့မင်္ဂလာဆောင်မျိုး မမြင်ဖူးဘူးဗျာ” လို့ပြောတော့ ကိုနွားက
“ပျော်စရာကြီးကွနော” လို့ပြုံးပြုံးကြီးပြောသတဲ့ .. .. ခဏနေတော့
မင်္ဂလာသတို့သား ကိုရွှေကျားနဲ့ သတို့သမီး မရွှေကျားတို့ထွက်လာတော့
ဘိတ်သိတ်သီချင်း တီးပါလေရော …. …. ဒီမှာတင် .. ခုနကနွားထီးကြီးက ထ ကတော့တာကိုး ..
.. .. ဒါကို မျောက်က တအံ့တသြကြည့်ရင်းနဲ့ မေးသတဲ့
“ကိုနွား ကိုနွား ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျ” ဆိုတော့ … ကိုနွားက .. ..
“ငါ့ညီအငယ်ဆုံးလေး မင်္ဂလာဆောင်တာဆိုတော့ ပျော်လွန်းလို့ပါကွာ”
လိုကပြောသတဲ့ .. .. ဒီတော့ မျောက်ကမေးတာပေါ့ .. .. “ ကိုနွားကလဲ
ကြံကြီးစည်ရာဗျာ .. ခင်ဗျားက နွား ဟိုက ကျား လားလားမှ မဆိုင်တာပဲ” လို့
“ ညီလေးမျောက် .. လောကမှာမင်းမသိတာတွေ အများကြီးရှိတယ်ကွ”
“ တကယ်တော့ ညီလေးရေ ခုမင်္ဂလာဆောင်နေတာ ငါ့ညီအရင်းကွ” လို့ပြောသတဲ့ … ..
ဒီမှာတင်မျောက်က .. “ ဗျာ .. ကိုနွား .. သတို့သားကျားက ကိုနွားရဲ့
ညီအရင်း ဟုတ်လား .. ဟားဟား … မဖြစ်နိုင်တာဗျာ
လာနောက်မနေပါနဲ့” လို့ ရယ်သွမ်းသွေးရင်းပြောသတဲ့ .. .. ဒီတော့မှ
ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ ပြောရှာသတဲ့ .. ..
“ညီလေးရေ တကယ်တော့ မင်္ဂလာမဆောင်ခင်တုံးကတော့ ငါလည်းပဲ အလွန်ဆိုး
အလွန်အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ ကျားတစ်ကောင်ပဲကွ” .. ..
(မင်္ဂလာဆောင်ပြီမှ နွားဖြစ်သွားရှာတာ) ဟဲဟဲ သယ်ချင်းတို့ ဆောင်ကြဦးမလား မင်္ဂလာ .. ..
ကြိုက်တယ်ဆို vote ပေးနော်။ကျနော် စာမေးပွဲအောင်ပြီး နောက်တစ်တန်း တက်ချင်လို့ .။(ဟီဟိ.......)
« Reply #686 on: September 17, 2011, 10:43:35 PM »
၉ လတော့ စောင့်ရမယ်။
-အမျိုးသား တစ်ဦးသည် အလုပ်တွင် အဆင်မပြေဖြစ်တိုင်း မိမိမှာတော့ မိသားစုအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်တွင် အနည်းဆုံး ၈ နာရီ အလုပ်လုပ်ရချိန်၌ ဇနီးဖြစ်သူ မှာ
အိမ်တွင် အေးအေးဆေးဆေး နေနိုင်နေကြောင်းကို တွေးမိကာ ဇနီးသည် ကိုမနာလိုဖြစ်နေတက်သည်။
မိန်းမအား မနာလိုမူတို့ အားကြီးလာသာအခါ တစ်ည ညအိပ်ရာ ၀င်ချိန်တွင် ဘုရားသခင်ကိုတိုင်တည်ဆုတောင်းသည်ဟူ၏။
“အဖ ဘုရားသခင်….. ကျွန်တော်သည် နေ့စဉ်အနည်းဆုံး ၈နာရီအလုပ်လုပ်ရချိန်တွင်ဇနီးဖြစ်သူမှာ အိမ်၌ ကောင်းစွာ နားနေနိုင်ပါသည်။ ဘ၀မှာ မမျှတပါ… သို့ဖြစ်ပါ၍
မိန်းမတို.၏ အေးဆေးသက်သာရှိသောဘ၀ ကို မြင်စွမ်းနိုင်ခွင့်ငှာ မနက်ဖြန် မနက်မှစ၍ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော့်မိန်းမတို့ဘ၀ တခဏ ဖြစ်ခွင့်ရပါစေသား အရှင်ဘုရား….”
ဟုဘုရားသခင်ထံ တိုင်တည် ဆုတောင်းလိုက်သည်။
အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းစွာပင် ဘုရားသခင်က “မင်းတောင်းတဲ့ဆု ပြည့်စေ” ဟုခွင့်ပြုလေသည်။
နောက်တစ်နေ့ မိုးလင်းချိန်တွင် အမျိုးသားမှာ အမျိုးသမီးဘ၀သို့ ထူးဆန်းစွာပြောင်းလဲသွားလေသည်။ ထို့ကြောင့်ယောက်ျားထက် ဦးစွာနိုးထကာ နံနက်စာ
ပြင်ဆင်ရလေသည်။ နံနက်စာပြင်ဆင်ပြီးနောက် ယောက်ျားလုပ်သူနှင့် သားသမီးများကိုနိူးကာ နံနက်စာကျွေးမွေးရသည်။ နံနက်စာကျွေးပြီးနောက် ယောက်ျားနှင့်ကလေးများ
ရုံးနှင့် ကျောင်းသွားနိုင်ရင် အ၀တ်အစား၊ ထမင်းဘူး တို့ကို ပြင်ဆင်ပေးရသည်။ကလေးများကို ကျောင်းသို့ပို့ရသည်။
ထို့နောက် ဈေးဝင်ဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်လာရသည်။ ချက်ပြုတ်ရသည်။ အ၀တ်လျှော်ရသည်။မီးပူတိုက်ရသည်။ အပြေးအလွား သတင်းစာ ဖတ်ရသည်။ ရုပ်မြင်သံကြား ကြည့်ရသည်။
ထို့နောက် ကလေးများကို ကျောင်းမှ ကြိုရသည်။ ကလေးများအား ရေမိုးချိုးပေးရသည်။အိမ်စာ ၀ိုင်းကူ လုပ်ပေးရသည်။ ယောက်ျား ရုံးမှ ပြန်လာချိန်တွင်
ရေမိုးချိုးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးပြီး ညစာ အတူစားရသည်။ ဆေးကြော သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရသည်။ယောက်ျားက စကားပြောဆို မေးမြန်လျှင် ပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားရပြီး
ယောက်ျားဖြစ်သူ အလိုအတိုင်း အိပ်ရာဝင်ရကာ ယောက်ျားစိတ်တိုင်းကျ ပြုသမျှနုရပြန်သည်။
နောက်တနေ့ နံနက်စောစောထချိန် မိန်းမ ဘ၀သို့ ရောက်နေဆဲ ဖြစ်သော ယောက်ျားသည်ဘုရားသခင်ထံ အပြေးအလွား ဆုတောင်းပြန်သည်။
“အဖ ဘုရားသခင်… ကျွန်တော်မျိုး(အဲ… ကျွန်မ) မှားသွားခဲ.ပါပြီ။ မိန်းမတွေမည်မျှပင်ပန်း၊ စိတ်ရှည်၊ သည်းခံရသည်ကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာမိပါပြီ။ ကျွန်တော်
မိန်း(အဲ ယောက်ျား၊ မဟုတ်ပါဘူး ဘုရား မိန်းမ) ကို ယခုမှ စပြီး ချစ်မြတ်နိုး၍ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ပါတော့မည်။ ကျွန်တော်မျိုးမအား ယောက်ျားဘ၀ကို
အခုချက်ချင်း ပြန်လည် ပေးသနားပါ။ မိန်းမနှင့်ဘ၀ချင်း ပြန်၍ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါဘုရား” ဟုလိူက်လိူက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းလေတော့သည်။
“မင်း (နင်) အမြင်မှန်ရ၍ ငါဝမ်းမြောက်လှပေသည်။ သို့သော်ငြား မင်း(နင်) သည်ယမန်နေ့ည က ယောက်ျားလုပ်သူအား ကောင်းစွာပြုစုခဲ့၍ သန္ဓေအောင်ခဲ့ပြီဖြစ်၍
နောက်ထပ် ၉ လမျှ အသာစောင့်၍ မွေးဖွားပြီးခါမှ ဘ၀ပြောင်းရန်ငါ့ထံဆုပြန်တောင်းလေ” ဟူသတည်း။
« Reply #687 on: September 18, 2011, 10:01:01 AM »
တရားသူကြီး။ ဘာလို့ နင့်ယောင်္ကျားကို ကုလားထိုင်နဲ့ ရိုက်ရတာလဲ၊
မိန်းမ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စားပွဲခုံက အရမ်းလေးနေတော့ မ မနိုင်လို့ပါ။
သူတောင်းစား။ မမချောချောရေ.. ထမင်းဖိုးလေး မ စ ပါဦးဗျာ၊
ဇနီး။ ကြည့်စမ်း ကြည့်စမ်း ဒီလူ အကန်းယောင်ဆောင်ပြီး
ဇနီး။ ဟင်း..... တကယ်ကန်းတယ်လို့ နင်က ဘယ်လိုသိတာလဲ၊
ယောင်္ကျား။ နင့်ကို မမချောချော လို့ခေါ်နေတယ်လေဟာ။
(ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် စကားပြောနေသည်)
ယောင်္ကျား-၁။ မိန်းမတွေ မငြိုငြင်အောင် ဘယ်လိုနေရမလဲ ..
ယောင်္ကျား-၂။ အင်း.. ကိုယ်ကမှားတဲ့အချိန်ကျရင် အမှန်အတိုင်းဝန်ခံလိုက်၊
ကိုယ်က မှန်တဲ့အချိန်ကျရင် တိတ်တိတ်နေပေးလိုက်။
ဇနီး။ ဘေးအိမ်က တစ်ယောက်ဆို သူ့မိန်းမကို တစ်နေ့သုံးကြိမ်
မွှေးမွှေးပေးတယ်၊ ညတိုင်း ညတိုင်း ပန်းလေးတွခူးပေးတယ်၊
နင်ရော အဲ့လိုမျိုး မလုပ်ပေးချင်ဘူးလား၊
ယောင်္ကျား။ အင်း … သူခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ပေးချင်တာပေါ့ဟ။
(လင်မယားနှစ်ယောက် တိရ စ္ဆာန်ရုံထဲသွားပြီး မျောက်ရွာသို့အရောက်)
ဇနီး။ ဟိုမှာ တွေ့လား… နင့်အမျိုးတွေ။
ယောင်္ကျား။ ဟုတ်တယ်လေ အဲ့ဒါ ငါ့ယောက္ခမနဲ့ယောက္ခထီးတွေပဲ ငါသိတာပေါ့ဟ။
(လင်မယားနှစ်ယောက် အကြီးအကျယ် ရန်ဖြစ်နေကြသည်)
ဇနီး။ ငါတို့လက်ထပ်တဲ့အချိန်တုန်းက ငါ့အဖေသာ ပိုက်ဆံတွေမပေးရင်
အခုလို LCD TV တွေ၊ ကားတွေ၊ အိမ်တွေ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး၊
ယောင်္ကျား။ အေး …. မင်းအဖေသာ ပိုက်ဆံတွေ မပေးရင် ငါလည်း အခုလို
ဒီအိမ်မှာ ရှိနေမှာ မဟုတ်ဘူး။
(မိန်းခလေး သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် စကားပြောနေကြသည်)
မိန်းမ-၁။ နင့်ယောင်္ကျားကို မချစ်နိုင်တော့ရင် သူ့ကိုထားခြဲ့ပီး သူ့အိမ်ကနေ
ဆင်းလိုက်ပါလား ဘာလို့ဒုက္ခ ခံနရတာလဲ၊
မိန်းမ-၂။ အင်း …. အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင် သူပျော်နေမှာကို ငါလည်း မမြင်ချင်ဘူးဟ။
ဇနီး။ နင်က နင့်အမျိုးကောင်းတဲ့အကြောင်းပဲ အမြဲပြောတယ်၊
ငါ့အမျိုးကောင်းတဲ့ အကြောင်းပြောတာ မရှိသလောက်ပဲနော်၊
ယောင်္ကျား။ သြော်… အေးအေး၊ ငါမေ့နေလို့ကွ၊ နင့်ယောက္ခမတွေက
မိန်းမ-၁။ ငါ့ယောင်္ကျားက ငါ့ကို လိမ်နေတယ်လို့ ငါထင်တယ်ဟဲ့၊
မိန်းမ-၂။ နင်က ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိတာလဲ ပြောပါဦးဟာ၊
မိန်းမ-၁။ မနေ့ညက အိမ်ကိုညနက်မှ ပြန်လာပြီး သူပြောတာလေ၊
သူ့သူငယ်ချင်း လှမောင်နဲ့အတူတူ ပါတီပွဲ သွားနေရလို့တဲ့၊
အဲ့ဒီညဦးပိုင်းမှာ သူ့သူငယ်ချင်း လှမောင်က ငါနဲ့အတူတူ ရှိနေတဲ့ဟာကို။
« Last Edit: September 22, 2011, 09:47:03 AM by tunaye2011 »
« Reply #688 on: September 18, 2011, 12:51:08 PM »
တစ်ခါက ရွာတရွာ မှာ သားဖြစ်သူက ဖခင်ကို သူမိန်းမယူတော့မယ့် အကြောင်း တိုင်ပင်သတဲ့။
ဒါနဲ့ အဖေက ဘယ်သူ၊ ဘယ်ဝါ၊ ဘယ်ရွာကလဲ၊ ဘယ်သူ့ သမီးလဲ မေးတော့ ----သားဖြစ်သူက
ပြောပြ လိုက်တာနဲ့-- အဖေက---မယူဖို့တားမြစ် သတဲ့။ သူပြောတာက အဲဒီ ကောင်မလေး အမေ
နဲ့သူဟာ ငယ်ငယ်တုန်းက ဟိုဟာ ဒီဟာ ဖြစ် ခဲ့ ကြဖူးတော့ --တော်ကြာ မောင်နှမတွေ ဘာတွေ
သားဖြစ်သူကလဲ မတတ်သာတဲ့အဆုံး လက်လျှော့လိုက်၇တာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ နောက်တယောက်ရှာယူဖို့ သူ့အဖေတိုက်တွန်းတာနဲ့ ---ရှာပြီး---တွေ့တော့ တိုင်ပင်ပြန်ပါသတဲ့။
ဒီတခါလဲ အ၇င်တုန်းကလိုပဲ သူအ့ဖေ ကပြောပြန် သတဲ့။
အဲဒီကောင်မလေးရဲ့အမေနဲ့လဲ သူက မလွတ်မကင်း ဖြစ်ဖူးလို့ မယူပါနဲ့ ဦး ပေါ့။ ထပ်ရှာပါ ဦး---
ဒီလိုနဲ့ သူလဲ ထပ်ရှာလာလိုက်တာ လေးငါးယောက်လောက်သာရှိသွား တယ် ----အားလုံးရဲ့ အမေတွေ
ဟာသူ့အဖေ လက်စွမ်းပြခဲ့ဖူးကြတဲ့ သူတွေ ချည်း ဖြစ်ဖြစ် နေတော့ သူ့မှာတော်တော် အခက် တွေ့နေရ
ပါေ၇ာ။ ထပ်ရှာ လဲ သူ့မှာ နာမည်ကတော်တော် ပျက်နေ၇လို့ ကောင်မလေးတွေကလဲရှောင်ဖယ်ဖယ်
သမီးရှင်တော်တော် များများကလဲ နှာခေါင်းရှူံ့ နေကြပြီဆိုတော့ တော်တော်အကြပ်ရိုက်နေ၇သတဲ့။
ဒါနဲ့ မဖြစ်တော့ဘူး ဆိုပြီး ---ဖြစ်ချင်၇ာဖြစ် သူ့အမေကို သွားပြောပြသတဲ့။
သူ့ အမေက ဟက်ဟက်ပက်ပက်ကို ၇ယ်မောပြီး ---ဒီတခါသားကြိုက်တဲ့သူတွေ့ရင် ယူသာ ယူပြစ်
လိုက် ဘာမှ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး စဉ်းစားမနေနဲ့ ---လို့ပြောသတဲ့။
သူကစိုး၇ိမ်တကြီးနဲ့ --အမေ၇ယ် ဒီတယောက်၇ဲ့အမေနဲ့လဲ အဖေက မကင်းခဲ့ဖူး ဆို၇င် ခက်ကုန် ပါ့
မယ်လို့ဆိုတော့----သူ့အမေက---သားရယ် မင်းမလဲ ခက်နေပြန်ပါပြီ---ဒီမယ်--
မင်းကိုလဲ အမေက မင်းအဖေနဲ့ညားမွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကွဲ့ သားရဲ့-----လို့ပြောလိုက်ပါသတဲ့။
*************ပြုံးယုံ ပြုံးရရင် တော်ပါပြီ*************************
« Reply #689 on: September 18, 2011, 03:53:00 PM »
သူသာ ဘော့စ်အစစ် ...
ပီတာတစ်ယောက် တော်တော်လေး ဒေါသထွက်နေပါတယ်။
သူ့စိတ်ထဲမှာ သူ့ဝန်ထမ်းတွေက သူ့အပေါ် အရေးမစိုက်ဘူးလို့လည်း ထင်နေပါတယ်။
ဒီတော့ နဂါးမှန်းသိအောင် အမောက်ထောင်ဦးမယ်ဟဲ့လို့တွေးရင်း
ဆိုင်းဘုတ်တွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်က 'ငါသည် ဘော့စ်'ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို ဝယ်ပြီး သူ့ရဲ့အခန်းတံခါးဝမှာ ကပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် နေ့လယ်စာစားရာကနေ ပြန်လာတော့ သူ့ဆိုင်းဘုတ်ရဲ့ အောက်ဘက်မှာ စာရွက်တစ်ရွက်ကို တိပ်နဲ့ကပ်ထားတာ တွေ့လို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ အခုလို ရေးထားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
"မိန်းမဖုန်းဆက်သည်။ သူ့ဆိုင်းဘုတ် ပြန်ပေးပါဟုပြောသည်" တဲ့။
သဘောကျလို့ရှဲလိုက်တယ်နော်.......